MY WALLPAPER...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ WALLPAPER လေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! အနီးကပ်ရိုက်ထားတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေနှင့် သဘာဝ ပုံလေးတွေပါ...!စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ယူသွားပါ...! ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုပုံလေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်...!သဘေားကျလို့ စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ...!အားလုံးပေါင်း (120 ပုံ ) ရှိပါတယ်...!အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 181.77MB )
2 Response to MY WALLPAPER...!
ကျေူးဇူးပဲ ကိုအောင် ရေ
ယူသွား ပြီဗျာ.း)